Kenya maxay uga caga-taaglaynaysaa arrinta Badda ee Maxkamadda hor taala. – KHAATUMO NEWS
Kenya maxay uga caga-taaglaynaysaa arrinta Badda ee Maxkamadda hor taala.
Maxkamadda adduunku waxay in badan kala dhex gashay dawladdo Dhul, Gasiirado, iyo Bad isku qabtay.
Qatar iyo Bahrain waxay isku qabteen Jasiirado. Sanadkii 1991 ayaa dawladda Qatar kaligeed gudbisay gal dacwadeed ay ku doonaysay in lagu eego Gasiirado ay isku hayaan dalka Bahrain, isla sanadkaas ayaa dalka Bahrain isna gudbiyey dacwad ka dhan ah dawladda Qatar maxkamadana ku eedeeyey in aanay xaq u lahayn in ay dhex gasho arrintan.
Sanadkii 1994kii ayaa maxkamadda adduunku sheegtay in ay shaqadeeda arrintani tahay oo ay labada dal u garqaadi karto, Qatar waxay soo bandhigtay waraaqo badan, laakiinse Bahrain waxay cadeysay in aanay aqbalayn waraaqaha dawlada Qatar soo bandhigtay , muddo ka dib Qatar waraaqihii ayey dib ula noqotay.
2001 maxkamadii adduunku waxay u xukuntay dhulkii laysku hayey ku dhawaad 70% Bahrain, Qatarna 30%. labada dalna way aqbaleen.
Waxaa iyaguna sidan oo kale Gasiirado isku qabtay Yaman iyo Eratariya, sanadkii 1995kii, waxayna isla ogolaadeen iyagu in ay Maxkamada adduunka isla aadaan, sanadkii 1999 waxaa Yaman loo xukumay salsaladihii Gasiiradaha loo yaqaanay Xaneesh, Elatiriyana way aqbashay go’aankii soo baxay.
Gardarada Kenya ee ku qotonta damaca badda Soomaaliya waxaa muuqata in ay markii horeba diidanayd in maxkamaddani xaq u leedahay in ay soo dex gasho labada dal oo ay u gar qaado labada laba dhinac.
Soomaaliyana waxay ku adkaysanaysay in ay maxkamaddu arrimahan xaq u leedahay, wajigii koowaad Soomaaliya ayaa ku guulaystay oo ahayd in Maxkamaddu xaq u leedahay in ay arrintan ka garnaqdo.
Hadda waxaa bilaab-maya Gal dacwadeedkii rasmiga ahaa, waxaana loo balamay in dal waliba soo gudbiyo doodiisa, Soomaaliya waa diyaar oo waxay soo diyaarsatay looyaro iyo dood adag, hasa yeeshee Kenya waxay ku andacoonaysaa in dib loogu dhigo si ay looyaro cusub u qabsato.
Sida muuqata Kenya dawcadeedu ma xooggana, sababtaas ayaana keenaysa in ay qareeno cusub qabsato, waana suurta gal in looyaradii hore garawsadeen in aanay Kenya kiiskan ku guulaysan karin.
Kenya codsigeeda wajiga uu yeesho waxaa lagu ogaan karaa sida ay ka yeelaan guddoonka maxkamada, waanse shaki ku jirin in garta Soomaaliya wadato ay tahay mid guushu la jirto, bulshada Soomaaliyeedna way ku garab taagan yihiin xukuumadooda dadaalka ay ugu jirto arrintan
Previous Post: Deg Deg:Dhirbaaxo Culus Oo Xalay Ku Dhacday Kenya,
Next Post: Muqaal Fadeexad Ah oo laga Soo Duubay Haweenka Hargaysa,